Wararka - Sidee Loo Beddelayaa Qalabka Mashiinka Baabuurka?
Qaybaha gawaarida gawaarida gawaarida bay'ada shaqadu waa mid adag, xiriir toos ah gaaska, heerkulka ugu sarreeya ee waalka qiiqa ayaa gaari kara 800 ℃, iyo dhamaadka wareegga saliidda, oo ay weheliso shaqaynta qalabka marka furitaanka iyo ficilku uu soo noqnoqdo, qaybaha waalka ayaa aad u fudud in wax soo saar la soo saaro. Sidaa darteed, waa in fiiro gaar ah loo yeesho qaybaha waalka ee dib-u-hagaajinta, si loo hubiyo inay ku jirto xaalad shaqo oo caadi ah.
1. Valve kormeerka iyo dayactirka
(1) Hubi qalooca madaxa waalka iyo jirida. Marka dhamaadka wiishka waalka uu xumaado ama duugmo, samee sixitaan, qiimaha sixitaankuna waa inuu noqdaa qiimaha ugu yar. Shiidi wejiga waalka.
(2) Beddel waalka haddii dhumucda ka waalka matoorka baabuurka wuu ka yaryahay qiimaha xadka. Markaad shaqeyneyso, fiiri dhamaadka wiish kasta oo waal ah leexinta, xirashada, iyo foorarsiga.
(3) Hubi dusha sare ee shaqada iyo jirida walwal kasta si aad uhesho, u gubato, ama u liidato, oo aad u beddesho haddii loo baahdo.
(4) Isticmaal xaddiga leexashada dhamaadka wiishka waalka: 0.1mm wiishka qaadashada, 0.1mm ee qalabka qaaca; qiimaha caadiga ah ee dhumucda madaxa waalka: 1.0mn ee waalka qaadashada, 1.5mm ee qiiqa qiiqa; xadka isticmaalka: 0.7mm oo loogu talagalay waalka qaadashada, 1.0mm loogu talagalay waalka qiiqa.
(5) Isticmaal mitir mitir iyo V-jir si aad u cabirto foorarka wiishka foorarka. Waalka waalka waxaa lagu taageeraa laba V-loox oo masaafo dhan 100 mm ah, ka dibna foorarsiga waxaa lagu cabiraa 1/2 dhererka waalka oo leh mitir mitir. Haddii xadka la oggol yahay la dhaafo, waa in lagu saxaa saxafad gacmeed.
2. Ka saarida qalabka waalka
Ka dib marka tareenka waalka la soo ururiyo, guga ayaa ku jira xaalad la soo raray, haddii si khaldan loo kala furfuro, guga ayaa soo bixi doona oo dhaawici doona jidhka bini'aadamka, sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qalab kala bixiyaha guga waalka si loo sameeyo hawlgal caadi ah marka la kala qaadayo tareenka waalka, si loo hubiyo kala furfurida amniga ee qaybaha gawaarida tareenka korantada. Sugaha guga ayaa lagu cadaadiyey guga horay loo sii adkeeyay iyadoo la saarayo guga si markaa qufulka qufulka uu u ahaado mid bilaash ah oo si fudud looga saari karo. Soo hayaha guga ayaa markaa si tartiib tartiib ah loogula nasanayaa guga ilaa guga uu kujiro boos bilaash ah oo xasiloon
3.Bedelaadda gariiradda kuraasta
Dusha sare ee shaqada kursiga waalka ayaa si tartiib tartiib ah u lulaya dhowr dib u habeyn ama shiidasho, taas oo saameyn ku yeelata iskaashiga caadiga ah ee u dhexeeya waalka iyo kursiga. Haddii dusha shaqada ee kursiga waalka uu ka hooseeyo 1.5mm dusha kursiga waalka, kolarka kursiga waalka waa in la beddelaa. mm, kollarka kursiga waalka waa in la beddelaa. Habka bedelka: isticmaal aalado gaar ah si aad ugala soo baxdo qoorta kursiga duug ah, ka dibna ku dheji qoorta fadhiga cusub oo leh 0. 0.75 ~ 0. 125 mm faragalin ah oo ku saabsan daloolka kursiga haanta dareeraha nitrogen ee qabow ayaa yaraanaya 15 ~ 20 s. Ka dib markii lagu riixay kursiga godka madaxa silsiladda si ay ugu kululaato heerkulka qolka. Haddii kale, kuleylka daloolka kursiga madaxa silsiladda illaa 100 ° C oo leh dabayl ama toosh gaas ah (dhaqan ku dhisan: ka hor inta aanad kululayn madaxa silsiladda, mari budada nuurad cad agagaarka daloolka kursiga, oo kuleyli ilaa 100 ° C marka budada cad waxay isu beddelaysaa huruud), ka dibna si dhakhso leh u garaac giraanta fadhiga oo qabooji hawada.